Custom bonded warehouse နဲ႔ပက္သတ္ၿပီး ဘာေတြသိထားၿပီးၿပီလဲ? - Logistics Guide
၁။ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္ (SEZ) ထဲမွာ Warehouse ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရိွသလဲ၊ bonded warehouse ကဘာလဲ …
၂။ Bonded Warehouse နဲ႔ SEZ Warehouse ကအတူတူပဲလား….
၃။ Bonded Warehouse ဘယ္လုိေလ်ာက္ရမလဲ ……………
၄။ ျပည္တြင္းမွာလူစိတ္၀င္စားေနတဲ့ bonded warehouse ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရိွမလဲ…
Tomoaki Yabe အေနနဲ႔ Daizen Myanmar ကုိစတင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ေလးကုိ ျပန္လည္ေျပာေပးထား တာပဲျဖစ္ပါတယ္။Daizen Myanmar ကို၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၅ လပုိင္းမွာ စၿပီး ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ SEZ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္တဲ့အတြက္ SEZအဖြဲ႕ထံမွ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံခြင့္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၅ လ ပုိင္းမွာ ရရွိခဲ့ပါတယ္။
ဘယ္အခ်ိန္မွာ SEZ Warehouse လုပ္ပုိင္ခြင့္ကိုရခဲ့ၿပီး ဘယ္လုိေတြႀကိဳးစားခဲ့ရတယ္။ ဘာေတြလုိအပ္ခဲ့သလဲဆုိတာနဲ႔ ပက္သတ္ၿပီးရွင္းျပေပးထားတာပါ။၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၂ လပိုင္း ၂၄ ရက္မွာ SEZ Warehouse လုပ္ကုိင္ခြင့္ကို ရခဲ့ပါတယ္။ SEZ Warehouse အေနျဖင့္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ကုိ ရခဲ့ပါတယ္။ Bonded Warehouseလုိ႔ သိၾကေပမဲ့ တကယ္တမ္း တရား၀င္ သုံးႏႈန္းတာကေတာ့ free zone warehouse လုိ႔ သုံးႏႈန္းပါတယ္။ တကယ့္တကယ္ လုိင္စင္ရဲ႕ အမ်ဳိးအစားကေတာ့ SEZ Warehouse ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ free zone warehouse ေရာ သာမန္ warehouseေရာ ႏွစ္ခုစလုံး လုပ္ကုိင္ခြင့္ ပါမစ္ကုိ ရပါတယ္။
warehouse မွာ ပစၥည္းလာထားတယ္။ custom က လာစစ္တယ္။ ပစၥည္းပုိင္ရွင္ customer နဲ႔ custom တုိ႔ၾကားမွာ Daizen Myanmar က အကုန္လုံးကုိ တာ၀န္ယူပါတယ္ဆုိၿပီး free zone warehouse မွာ ပစၥည္းေတြကုိ Accept လုပ္ေပးထားပါတယ္။ SEZ ဆိုတာဘာလဲ၊ SEZ Bonded Warehouse နဲ႔ပက္သတ္လုိ႔ သက္ဆုိင္ရာကခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ အခက္အခဲေတြနဲ႔ပက္သတ္ၿပီးလည္း အခုလုိရွင္းျပေပးထားခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီေတာ့ ဒီမွာဆုိလုိ႔ရွိရင္လည္း SEZ ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြထဲမွာဆုိရင္ အခြန္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ free zone နဲ႔ပက္သတ္တဲ့ warehouse ရွိကုိ ရွိရမယ္ဆုိတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ရွိထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကုိ အေထာက္အကူ ေပးႏုိင္ဖုိ႔ Daizen Myanmar ကုမၸဏီက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး လုပ္ကုိင္မယ့္ ရည္ရြြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၅ လပုိင္းမွာ လုိင္စင္ရဖုိ႔ စေလွ်ာက္တယ္။
ေလွ်ာက္ထားတုန္းမွာ warehouse ကုိစေဆာက္တယ္။ တည္ေဆာက္မႈ လုံး၀ၿပီးသြားတာက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၆ လပုိင္းမွာ ၿပီးတယ္။ တကယ့္တကယ္ လုိင္စင္ရလာတာက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၂ လပုိင္းက်မွရခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုိင္စင္ရဖုိ႔ ႏွစ္၀က္ေလာက္ ၾကာခဲ့တယ္။ research လုပ္တာေတြ၊ review လုပ္တာေတြအတြက္ အခ်ိန္ေပးခဲ့ရပါတယ္။
Thilawa SEZ Management Committee ဆုိတာ ရွိတယ္။ အဲဒီ ေကာ္မတီကေနခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းမွာ SEZ warehouse အတြက္လုိအပ္တဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ warehouse ကုိ မျဖစ္မေန လုပ္ကုိင္တဲ့အခါ ဘာေတြကုိ လုိက္နာရမယ္ဆုိတာ သတ္မွတ္ထားၿပီးသား ရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ လုိင္စင္ကုိ စေလွ်ာက္ကတည္းက အဲဒီ rules and regulations ေတြကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာၿပီးေတာ့မွ အဲဒီအခ်က္ေတြအတုိင္း လုိင္စင္ကုိ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါတယ္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ လုိင္စင္ကုိ ရခဲ့ေပမဲ့ ဒီလုိင္စင္ကုိ သုံးစြဲၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းစဖို႔ အခ်ိန္နည္းနည္း ၾကာခဲ့တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ SEZ custom ရွိတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒီဘက္ကမ္းမွာ custom ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ Thilawa SEZ Management Committe ရွိတယ္။ အဲဒီ ၃ ဖြဲ႕စလုံး အက်ဳံး၀င္တဲ့ တသမတ္တည္း ေသေသခ်ာခ်ာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ မရွိဘူး။ အဲဒီ ၃ ဖြဲ႕မွာ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ကြဲလြဲေနတယ္။
ဒီေတာ့ အဲဒီ ၃ ဖြဲ႕ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆြးေႏြးၾကၿပီးေတာ့ rules and regulation ေတြကုိ ရလာတဲ့အထိ အခ်ိန္နည္းနည္းေပးၿပီးေတာ့ ေစာင့္ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီလုိ ညိႇႏႈိင္းၾကတာမွာ ဘာေတြကုိ ညိႇလုိ႔ မရသလဲဆုိေတာ့ custom က်ေတာ့ ဒီပစၥည္းေတြက ၀င္လာၿပီ။ Daizen Myanmar ရဲ႕ warehouse မွာ ထားမယ္။ ၿပီးရင္ အဲဒီပစၥည္းကုိ ျပန္ထုတ္ယူၿပီး အခြန္မ ေဆာင္ဘဲ ေရာင္းစားလုိက္တာမ်ဳိးကုိ သူတုိ႔က စိတ္ပူတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ inventory ကုိ ဘယ္လုိ record လုပ္မလဲ။ ပစၥည္း ခုေရ တစ္ရာ ၀င္လာမယ္။ အဲဒီပစၥည္းေတြက အခြန္မေဆာင္ထားဘူး။ ျပန္ထုတ္ေတာ့ အကုန္လုံး ထုတ္တာလား၊ တခ်ဳိ႕ပဲ ထုတ္တာလား ဆုိတာေတြအတြက္ inventory ရဲ႕ control ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး custom က စိတ္ပူတယ္။
SEZ warehouse ေလွ်ာက္ထားဖုိ႔နဲ႔ပက္သတ္ၿပီး အေရးႀကီးအခ်က္လက္ေတြကိုလည္း အခုလုိရွင္းျပေပးထားခဲ့ပါတယ္။SEZ warehouse လုိင္စင္ကုိ ေလွ်ာက္ဖုိ႔ အဓိက အခ်က္ ၄ ခ်က္ ရွိတယ္။ ပထမတစ္ခ်က္က ေလွ်ာက္ထားမယ့္ ကုမၸဏီသည္ financial အတြက္ အပါအ၀င္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ ကုမၸဏီ ျဖစ္ရမယ္။ တကယ္ခုိင္မာတဲ့ ကုမၸဏီ ျဖစ္ရမယ္။ ဒုတိယတစ္ခ်က္ကေတာ့ custom officers ေတြက အခ်ိန္မေရြး warehouse ကုိ လာစစ္ေဆးမယ္။ စစ္ေဆးတာကုိ လက္ခံႏုိင္ရမယ္။ warehouse ေဆာက္မယ္ဆုိကတည္းက specification ကလည္း အဲဒီ ပုံစံအတုိင္း ျဖစ္ေနရမယ္။ တတိယေျမာက္ တစ္ခ်က္ကေတာ့ ၂၄ နာရီ ပတ္လည္ CCTV နဲ႔ အၿမဲတမ္း ေစာင့္ၾကည့္ေနရမယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ freezone warehouse နဲ႔ သာမန္ warehouse ကုိ ေနရာ ေသေသခ်ာခ်ာ ကာရံထားၿပီး သီးသီးျခားျခား သတ္မွတ္ထားရမယ္။
SEZ bonded Warehouse နဲ႔ အျခားေသာ အျပင္က bonded Warehouse တုိ႔ရဲ႕ကြာျခားမႈနဲ႔ တကယ္လုိ႔ မ်ားအခြင့္အေရးရခဲ့ရင္ အျပင္က bonded warehouse ကိုလုပ္ကိုင္ဖုိ႔ေရာ အစီအစဥ္ရိွမရိွ။
Daizen Myanmar လုပ္ကုိင္ေနတာက Free zone warehouse ျဖစ္တဲ့အတြက္ SEZ ထဲမွာ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအတိုင္း လုပ္ကုိင္ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ SEZ မဟုတ္တဲ့ ေနရာ အျပင္မွာ က်ေတာ့ bonded warehouse ကုိ အခုမွ ခြင့္ျပဳမယ္ စမယ္ဆုိေတာ့ ဘယ္လုိအခ်က္အလက္ေတြ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိတာ မသိရေသးလုိ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ေျပာၾကားလုိ႔ မရႏုိင္ေသးဘူး။ ဒီေတာ့ ကြာျခားခ်က္ေတြကုိ ေျပာျပဖုိ႔ ခက္ခဲေနပါေသးတယ္။ Daizen Myanmar အေနျဖင့္ အခုလုိ လုပ္ကုိင္တာေတြကုိ အေတြ႕အႀကံဳ ရွိထားၿပီးျဖစ္လုိ႔ တကယ္လုိ႔ SEZ မဟုတ္တဲ့ အျပင္ေနရာမွာ bonded warehouse လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ အခြင့္သာခဲ့ရင္ေတာ့ ရထားၿပီးသား အေတြ႕အႀကံဳေတြကုိ အသုံးခ်ၿပီး လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ ရွိပါတယ္။
Custom bonded warehouse နဲ့ပက်သတ်ပြီး ဘာတွေသိထားပြီးပြီလဲ?
၁။ သီလဝါစက်မှုဇုန် (SEZ) ထဲမှာ Warehouse ဘယ်နှစ်မျိုးရှိသလဲ၊ bonded warehouse ကဘာလဲ …
၂။ Bonded Warehouse နဲ့ SEZ Warehouse ကအတူတူပဲလား….
၃။ Bonded Warehouse ဘယ်လိုလျောက်ရမလဲ ……………
၄။ ပြည်တွင်းမှာလူစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ bonded warehouse ဘယ်နှစ်မျိုးရှိမလဲ…
လက်ရှိ Logistics ကဏ္ဍနဲ့ပက်သတ်လို့ လူအများစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Bonded Warehouse နဲ့ပက်သတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးသော SEZ Bonded Warehouse အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားခဲ့တဲ့ Daizen Myanmar ကုမ္ပဏီရဲ့ Managing Director ဖြစ်သူ Tomoaki Yabe နဲ့ ၁၂ရက်နေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၉ခုနှစ်က သွားရောက်မေးမြန်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Tomoaki Yabe အနေနဲ့ Daizen Myanmar ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးကို ပြန်လည်ပြောပေးထား တာပဲဖြစ်ပါတယ်။Daizen Myanmar ကို၂၀၁၅ ခုနှစ် ၅ လပိုင်းမှာ စပြီး ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ SEZ ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်တဲ့အတွက် SEZအဖွဲ့ထံမှ ရင်းနှီးမြှုုပ်နှံခွင့်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၅ လ ပိုင်းမှာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ SEZ Warehouse လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုရခဲ့ပြီး ဘယ်လိုတွေကြိုးစားခဲ့ရတယ်။ ဘာတွေလိုအပ်ခဲ့သလဲဆိုတာနဲ့ ပက်သတ်ပြီးရှင်းပြပေးထားတာပါ။၂၀၁၇ ခုနှစ် ၂ လပိုင်း ၂၄ ရက်မှာ SEZ Warehouse လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ရခဲ့ပါတယ်။ SEZ Warehouse အနေဖြင့်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ရခဲ့ပါတယ်။ Bonded Warehouseလို့ သိကြပေမဲ့ တကယ်တမ်း တရားဝင် သုံးနှုန်းတာကတော့ free zone warehouse လို့ သုံးနှုန်းပါတယ်။ တကယ့်တကယ် လိုင်စင်ရဲ့ အမျိုးအစားကတော့ SEZ Warehouse ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ free zone warehouse ရော သာမန် warehouseရော နှစ်ခုစလုံး လုပ်ကိုင်ခွင့် ပါမစ်ကို ရပါတယ်။
warehouse မှာ ပစ္စည်းလာထားတယ်။ custom က လာစစ်တယ်။ ပစ္စည်းပိုင်ရှင် customer နဲ့ custom တို့ကြားမှာ Daizen Myanmar က အကုန်လုံးကို တာဝန်ယူပါတယ်ဆိုပြီး free zone warehouse မှာ ပစ္စည်းတွေကို Accept လုပ်ပေးထားပါတယ်။ SEZ ဆိုတာဘာလဲ၊ SEZ Bonded Warehouse နဲ့ပက်သတ်လို့ သက်ဆိုင်ရာကချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေနဲ့ပက်သတ်ပြီးလည်း အခုလိုရှင်းပြပေးထားခဲ့ပါတယ်။
SEZ ဆိုတာက Special Economic Zone ပါ။ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှာလည်း SEZ တွေ ရှိပါတယ်။ SEZ ထဲမှာ စက်ရုံတွေ ရှိမယ်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ကိုင်တယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာပဲ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ကိုင်ပြီး ဒီနိုင်ငံမှာပဲ ပြန်ဖြန့်တယ်။ promotion zone လို့ခေါ်ပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးက ပြည်ပပို့ကုန်အဖြစ် ထုတ်လုပ်တယ်။ သူက export only ပဲ လုပ်တယ်။ free zone ရှိတယ်။
နိုင်ငံတွေမှာ SEZ ကို ထူထောင်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ပြည်ပမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို ဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ဆီမှာ ပါလာမယ့် technology တွေကို ကိုယ့်ဆီမှာ ပြန်ဖြန့့်ဖြူးချင်တဲ့အတွက် infrastructure တစ်ခုကို လုပ်ပေးထားလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ အဓိကအားဖြင့် promotion zone ရယ်၊ free zone ရယ် ရှိတယ်။ Promotion zone ရယ်၊ free zone တွေမှာ production တွေ လုပ်ကိုင်ကြတယ်။ ဖြန့်ဖြူးကြတယ်။ အဲဒီအတွက် SEZ မှာ supply chain အတွက် စပြီး လုပ်ကိုင်ဖို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုမယ့်သူတွေကို ဖိတ်ခေါ်တယ်။ Product ထုတ်လုပ်မယ့် ကုမ္ပဏီတွေက ကုန်ကြမ်း raw materials တွေကို တင်သွင်းလာမယ်။ ဒီမှာ သူတို့ ထုတ်လုပ်မယ်။ ပြီးရင်ဖြန့်ချိမယ်။ transport လုပ်ရတယ်။ ဒီဟာတွေ အကုန်လုံး ပြီးစီးသွားဖို့ အတွက် logistics ကုမ္ပဏီရှိဖို့ အဓိကအားဖြင့် လိုအပ်လာတယ်။
SEZ ထဲမှာ promotion zone ရယ်၊ free zone ရယ် ရှိနေတာမှာ free zoneမှာ ကျတော့ ပစ္စည်းတွေကို အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် တင်သွင်းလို့ ရတယ်။ promotion zone ကျတော့ သွင်းလာသမျှ ပစ္စည်းတွေကို အခွန်ဆောင်ထားရတယ်။ Production က ပိုတိုးလာတယ်ဆိုရင် သူတို့ ပစ္စည်းတွေ ထားသိုဖို့ နေရာတွေ လိုအပ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါ SEZ အထဲမှာ အဲဒီအတွက် warehouse ထားရှိပေးတာမှာ promotion zone အတွက်နဲ့ free zone အတွက်ဆိုပြီး နှစ်ခုခွဲမှရမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခွန်မဆောင်သေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ရှိမယ်။ အခွန်လုံး၀ ပေးဆောင်စရာ မလိုတာရှိမယ်။ အဲဒီနှစ်မျိုး ထားဖို့ SEZ အထဲမှာ SEZ warehouse လိုကိုလိုအပ်လာတယ်။
အဲဒီတော့ ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း SEZ ရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေထဲမှာဆိုရင် အခွန်နဲ့ပတ်သက်လို့ free zone နဲ့ပက်သတ်တဲ့ warehouse ရှိကို ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ရှိထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနှစ်မျိုးစလုံးကို အထောက်အကူ ပေးနိုင်ဖို့ Daizen Myanmar ကုမ္ပဏီက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး လုပ်ကိုင်မယ့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၅ လပိုင်းမှာ လိုင်စင်ရဖို့ စလျှောက်တယ်။
လျှောက်ထားတုန်းမှာ warehouse ကိုစဆောက်တယ်။ တည်ဆောက်မှု လုံးဝပြီးသွားတာက ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၆ လပိုင်းမှာ ပြီးတယ်။ တကယ့်တကယ် လိုင်စင်ရလာတာက ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၂ လပိုင်းကျမှရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုင်စင်ရဖို့ နှစ်ဝက်လောက် ကြာခဲ့တယ်။ research လုပ်တာတွေ၊ review လုပ်တာတွေအတွက် အချိန်ပေးခဲ့ရပါတယ်။
Thilawa SEZ Management Committee ဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲဒီ ကော်မတီကနေချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းမှာ SEZ warehouse အတွက်လိုအပ်တဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေရှိတယ်။ ပြီးတော့ warehouse ကို မဖြစ်မနေ လုပ်ကိုင်တဲ့အခါ ဘာတွေကို လိုက်နာရမယ်ဆိုတာ သတ်မှတ်ထားပြီးသား ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ လိုင်စင်ကို စလျှောက်ကတည်းက အဲဒီ rules and regulations တွေကို သေသေချာချာ လေ့လာပြီးတော့မှ အဲဒီအချက်တွေအတိုင်း လိုင်စင်ကို လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ လုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ကို ရခဲ့ပေမဲ့ ဒီလိုင်စင်ကို သုံးစွဲပြီးတော့ လုပ်ငန်းစဖို့ အချိန်နည်းနည်း ကြာခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ SEZ custom ရှိတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ ဒီဘက်ကမ်းမှာ custom ရှိတယ်။ ပြီးတော့ Thilawa SEZ Management Committe ရှိတယ်။ အဲဒီ ၃ ဖွဲ့စလုံး အကျုံးဝင်တဲ့ တသမတ်တည်း သေသေချာချာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ မရှိဘူး။ အဲဒီ ၃ ဖွဲ့မှာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ကွဲလွဲနေတယ်။
ဒီတော့ အဲဒီ ၃ ဖွဲ့ တစ်ပြိုင်တည်း ဆွေးနွေးကြပြီးတော့ rules and regulation တွေကို ရလာတဲ့အထိ အချိန်နည်းနည်းပေးပြီးတော့ စောင့်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီလို ညှိနှိုင်းကြတာမှာ ဘာတွေကို ညှိလို့ မရသလဲဆိုတော့ custom ကျတော့ ဒီပစ္စည်းတွေက ဝင်လာပြီ။ Daizen Myanmar ရဲ့ warehouse မှာ ထားမယ်။ ပြီးရင် အဲဒီပစ္စည်းကို ပြန်ထုတ်ယူပြီး အခွန်မ ဆောင်ဘဲ ရောင်းစားလိုက်တာမျိုးကို သူတို့က စိတ်ပူတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ inventory ကို ဘယ်လို record လုပ်မလဲ။ ပစ္စည်း ခုရေ တစ်ရာ ဝင်လာမယ်။ အဲဒီပစ္စည်းတွေက အခွန်မဆောင်ထားဘူး။ ပြန်ထုတ်တော့ အကုန်လုံး ထုတ်တာလား၊ တချို့ပဲ ထုတ်တာလား ဆိုတာတွေအတွက် inventory ရဲ့ control တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး custom က စိတ်ပူတယ်။
Thilawa SEZ Management Committee ကကျတော့ ဘာကို စိတ်ပူတာလဲဆိုတော့ သွင်းလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေက free zone warehouse ဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ အခွန်မဆောင်ရလို့ မစစ်ဆေးရသေးဘူး။ အဲဒီအခါမှာ သွင်းခွင့် မရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ ခွင့်ပြုချက် မရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေ တင်သွင်းမှာကို စိတ်ပူတယ်။ ဘယ်လို အချက်မျိုးတွေကို အခြေခံပြီးတော့ ကာကွယ်ပေးနိုင်မလဲ။ ဒီလိုဟာမျိုးတွေ တင်သွင်းမလာအောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ဒီတော့ ဒီလို အချက်မျိုးတွေကို ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲဆိုတာ သူတို့အချင်းချင်း ဆွေးနွေးကြတယ်။ အဲဒီလို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြပြီး အတည်ပြုပေးတာကို စောင့်ဆိုင်းရတဲ့အတွက် Daizen Myanmar အနေဖြင့် ၂ လပိုင်းမှာ လိုင်စင် ရပေမဲ့ တကယ့်တကယ် စသုံးခဲ့ရတာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၁၂ လပိုင်းကျမှ ဖြစ်ပါတယ်။
SEZ warehouse လျှောက်ထားဖို့နဲ့ပက်သတ်ပြီး အရေးကြီးအချက်လက်တွေကိုလည်း အခုလိုရှင်းပြပေးထားခဲ့ပါတယ်။SEZ warehouse လိုင်စင်ကို လျှောက်ဖို့ အဓိက အချက် ၄ ချက် ရှိတယ်။ ပထမတစ်ချက်က လျှောက်ထားမယ့် ကုမ္ပဏီသည် financial အတွက် အပါအဝင် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ရမယ်။ တကယ်ခိုင်မာတဲ့ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ရမယ်။ ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ custom officers တွေက အချိန်မရွေး warehouse ကို လာစစ်ဆေးမယ်။ စစ်ဆေးတာကို လက်ခံနိုင်ရမယ်။ warehouse ဆောက်မယ်ဆိုကတည်းက specification ကလည်း အဲဒီ ပုံစံအတိုင်း ဖြစ်နေရမယ်။ တတိယမြောက် တစ်ချက်ကတော့ ၂၄ နာရီ ပတ်လည် CCTV နဲ့ အမြဲတမ်း စောင့်ကြည့်နေရမယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ freezone warehouse နဲ့ သာမန် warehouse ကို နေရာ သေသေချာချာ ကာရံထားပြီး သီးသီးခြားခြား သတ်မှတ်ထားရမယ်။
SEZ bonded Warehouse နဲ့ အခြားသော အပြင်က bonded Warehouse တို့ရဲ့ကွာခြားမှုနဲ့ တကယ်လို့ များအခွင့်အရေးရခဲ့ရင် အပြင်က bonded warehouse ကိုလုပ်ကိုင်ဖို့ရော အစီအစဉ်ရှိမရှိ။
Daizen Myanmar လုပ်ကိုင်နေတာက Free zone warehouse ဖြစ်တဲ့အတွက် SEZ ထဲမှာ ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်း လုပ်ကိုင်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ SEZ မဟုတ်တဲ့ နေရာ အပြင်မှာ ကျတော့ bonded warehouse ကို အခုမှ ခွင့်ပြုမယ် စမယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုအချက်အလက်တွေ ချမှတ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာ မသိရသေးလို့ နှိုင်းယှဉ်ပြောကြားလို့ မရနိုင်သေးဘူး။ ဒီတော့ ကွာခြားချက်တွေကို ပြောပြဖို့ ခက်ခဲနေပါသေးတယ်။
Daizen Myanmar အနေဖြင့် အခုလို လုပ်ကိုင်တာတွေကို အတွေ့အကြုံ ရှိထားပြီးဖြစ်လို့ တကယ်လို့ SEZ မဟုတ်တဲ့ အပြင်နေရာမှာ bonded warehouse လုပ်ကိုင်ဖို့ အခွင့်သာခဲ့ရင်တော့ ရထားပြီးသား အတွေ့အကြုံတွေကို အသုံးချပြီး လုပ်ကိုင်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်။